Himannaan Laamroot Kamaal irratti Dhihaate Har’as Murtii Xumuraa Hin Arganne
Adoolessa 12, 2021
Manni Murtii Olaanaa Federaalaa, dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammataa harra himata Laamroot Kamaal ka ajjeechaa Hacaaluun shakkamtee jirturratti murtee laachuuf beellama biro qabate.
Ajjeechaa Hacaaluu hundeessaan kan himatamte Laamroot kamaaliin dhaddachi mana Murtii Olaanaa Federaalaa ka Lidetaa jiru bilisa jedheenii ture. Yaa tahu malee Abbaan Alangaa Federaalaa murtee kana rratti Mana Murtii Olaaanaa federaalaa Siddisti Kiilootti Ol iyyannoo ka galafatee ture yoo tahu Dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa dhimma Laamroot Kamaal irratti murtee kennuuf har'atti jechuun adoolessa 5, bara 2013tti beellamee ture.
Haa tahu male daddacha ka gaggeessan abbaan seeraa, wal falmii garee lamaanii daddhacha darbeerratti murtee harra kennuun akka hin danda’amne eeranii ammas beellama biroo adoolessa 22, bara 2013’f qabaniiru.
Bakka jirtuu ka dhaddacha kana hordofte himatamtuun Laamroot Kamaal manni murtee beellama kiyya na duraa dheeresseera jechaan himatte.
Abbaan Seeraa dhaddachaa garuu, adoolessa 22 asitti beellama biroo qabuu hi ndandeenyuu jechaan murtee duraan dabarsan raggaasisaniiru.
Ammas Manni Murtii Olaanaa Federaalaa Lidetaa yaada himatamtoota sadeenii kanaa dhaggeeffachuuf Roobii dhufu; jechuun Adoolessa 8, bara 2013tt beellama qabatee jira.